Enga anie 11, 2020
Ao amin'ny Covid-19 valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety, ireo mpitarika ny Nosy Cayman dia nanamafy fa ny etona ao ambadiky ny valin'ny Nosy Cayman manoloana ny valanaretina COVID-19, dia manohy mametraka fiainana mihoatra ny fiheverana rehetra.
Taorian'ny vavaka notarihin'i Mompera Naveen D'Souza, dia nanamafy ihany koa ireo mpitarika fa miasa mafy ny governemanta mba hiantohana fa ny hetsika ara-toekarena eo an-toerana, izay manimba, dia afaka misokatra haingana sy azo antoka ho an'ny rehetra ao amin'ny fiarahamonina. "Ny Nosy Cayman dia tsy vonona ny hanao sorona aina mba hiverenana amin'ny laoniny", hoy ny praiminisitra Hon. Alden McLaughlin.
Ireo zokiolona manana harem-pahalalana, fahendrena ary traikefa izay entin'izy ireo dia nanan-danja sy mitohy ho sarobidy hatrany amin'ny fomba fiainana sy soatoavina caymanianina.
Niantso ny rehetra any amin'ny nosy Cayman ny mpitarika mba hanana faharetana ary hanohy hatoky ny fepetra napetraka hiasa.
Tamin'ny valiny 297 voaray dia 296 no nanandramana ny ratsy ary ny iray tsara, izay tranga fitaterana eo amin'ny fiarahamonina ary tsy misy fetr'andro. Ny fanadihadiana ny fomba nahitana ilay marary dia natomboky ny Fahasalamam-bahoaka, anisan'izany ny fanarahana ny fifandraisana.
Ny fironana ankehitriny manimba ny ankamaroan'ny olona dia mamporisika ary mitohy ny fitiliana bebe kokoa.
Tao amin'ny HSA Flu Clinic dia nisy marary 8 omaly raha nahatratra 14 ny antso hotline Flu.
Olona 90 izao no eo am-pelatanan'ny governemanta fitokanana tsy maintsy araraotina, ankoatry ny olona 104 izay mitoka-monina any amin'ny fiarahamonina.
Nahemotra ny fizahana tsy tapaka izay atao amin'ny fidirana an-tsekoly isan-taona noho ny toe-javatra misy ankehitriny noho ireo mpitsabo mpanampy amin'ny fahasalamam-bahoaka napetraka hiatrika COVID-19.
Ny fahasalamam-bahoaka dia nanohy ny toeram-pitsaboana enina herinandro taorian'ny nahaterahana sy ny fanaovana vaksiny, niara-niasa tamin'ny dokoteran-jaza tao HSA, mpiasan'ny fahasalamam-bahoaka ary tobim-pitsaboana tsy miankina sasany. Manomboka amin'ny Alatsinainy 11 Mey, ny olona mitady serivisy dia tokony hifandray amin'ny 244-2562 hiresaka amin'ny mpitsabo mpanampy amin'ny fahasalamam-bahoaka ary hahazo vaovao farany; mametraka hafatra raha tsy mahazo valiny izy ireo, izay haverina haingana.
Ireo marary tsy vonjy maika dia afaka mifandray amin'ny toeram-pitsaboana ankapobeny HSA ho an'ny filan'izy ireo amin'ny alàlan'ny fitsaboana tele, preskripsi na fanadihadiana. Ny tobim-pitsaboana tsy miankina ihany koa dia manome serivisy tele-fitsaboana.
Hopitaly misahana ny fahasalamam-bahoaka 2 no hatsangana raha toa ka mitombo ny isan'ny tranga ka manjary tototry ny HSA. Manantena aho fa tsy ho ilaina izany fa raha sanatria. Izy ireo dia hampiasaina amin'ny fitsaboana ny marary amin'ny ankapobeny sy ny tranga COVID -19 malemy kokoa. Raha jerena ny fironana amin'ny valin'ny fitsapana ankehitriny, raha tsy ampiasaina ireo fotodrafitrasa dia mbola hanome loharanom-pahasoavana sarobidy azo hatsangana izy ireo raha misy rivo-doza na loza hafa.
Torohevitra ho an'ireo miomana hiverina hiasa: misotro rano be dia be, mijanona ho salama ara-tsaina sy ara-batana, manohiza manadio ny fiaraha-monina, ny fifohana rivotra ary ny fidiovana amin'ny tanana.
Tsy misy drafitra hanadiovana ny habakabaka am-bahoaka izao.
Noho ny fanerena hanohy hisokatra dia nanamarika i Premier fa "mampivarahontsana" ny fanaovana sorona be dia be mandraka ankehitriny amin'ny maha-firenena sy vahoaka iray azy, fa ny fanary azy rehetra fotsiny satria ny sasany amin'ny fiarahamonina dia tsy afaka miandry herinandro na roa manokatra orinasa indray.
Ny "etos" an'i Cayman araka izay tratry ny olombelona dia ny fitehirizana ny ainy ary tsy vonona ny hanao sorona aina mba hiverenana amin'ny ara-dalàna. Io fomba fijery io dia tsy tokony hiova amin'izao dingana izao. Ka ny zava-drehetra dia natao mba hampitomboana ny fisavana ka takatry ny manam-pahefana tsara ny fihanaky ny viriosy ao amin'ny fiarahamonina, arahana ny dingana hataony hanarahana, hanarahana lalana ary hitsaboana azy ireo.
Ny faharetana dia takiana amin'ny rehetra na dia ankasitrahana aza fa zava-dehibe ny asa sy ny toekarena.
Navoaka tamin'ny ankamaroan'ny fameperana i Little Cayman; Cayman Brac dia misy ihany koa fanakanana fiarovana fanampiny vitsivitsy manan-kery. Grand Cayman dia ho eo amin'io toerana io atsy ho atsy raha toa ny fampitomboana ny valin'ny fisavana dia mbola mamporisika azy ireo ihany ankehitriny.
Ny Nosy Cayman dia nanaja hatrany hatrany ireo zokiolona, ​​indrindra ny fahendreny, ny fahalalany ary ny fomba fampiroboroboany ny fiainan'ny tsirairay. Zava-dehibe ny fiainan'izy ireo.
Naniry ny firarian-tsoa fitsingerenan'ny andro nahaterahana ho an'ny Speaker of the House teo aloha, Hon. Mary Lawrence, 80 taona androany, ary Lehiben'ny mpiandraikitra ny fanabeazam-pirenena Ramatoa Islay Conolly izay 97 taona ankehitriny, Ramatoa Hyacinth Rose sy Ramatoa Miriam Anglin, ary koa ny fiarahaban'ny Fetin'ny Reny an'ireo reny rehetra eo amin'ny fiarahamonina.
Ny sisa tavela tamin'ny MLA teo aloha, Ramatoa Leda Esterleen Ebanks dia nametraka tao amin'ny LA androany, izay nanatontosana ny sainam-pirenena ho mariky ny fanajana ireo taona niasany tamin'ny asam-panjakana. Premier dia nitarika fahanginana iray minitra ho fahatsiarovana azy.
Ny faritany britanika any ivelany dia mahavita tsara amin'ny valin'ny COVID-19 ary manoloana izany, toa antsika ihany koa, ny voka-dratsin'ny toekarena dia mitazona ny fomba hitazomana ny fireneny mandritra ny 6-9 volana manaraka tsy misy mpizahatany.
Ny governora dia nanako ny praiminisitra momba ny etosan'ny Nosy Cayman noho ny famonjena aina sy ny fanajana nomena ny zokiolona ao amin'ny fiarahamonina.
Nanolotra fiaraha-miory amin'ny fianakavian-dRamatoa Esterleen 'Esther' Ebanks izay efa nodimandry izy ary ny firarian-tsoa fitsingerenan'ny andro nahaterahana ho an'ny Speaker teo aloha sy ny CEO taloha nomen'ny Premier.
Ankasitrahany ihany koa ny fomba fiasa nataon'ny maro an'isa amin'ny fiarahamonina amin'ny fiatrehana ny takiana COVID-19.
Ny sidina famindrana an'i Costa Rica sy Honduras dia nijanona androany.
Ny sidina Miami dia atao ny zoma 15 may ary afaka hamandrihana mivantana miaraka amin'i Cayman Airways amin'ny Internet na amin'ny fiantsoana 949-2311. Ny sidina miverina dia misokatra ho an'ny mpandeha efa nekena ihany ary ny Cayman Airways dia hifandray amin'izy ireo mivantana.
Ny sidina mankany amin'ny Repoblika Dominikanina dia atao ny alahady 17 may ary ireo izay mikasa ny handeha dia tokony hifandray mivantana amin'ny CAL ihany koa. Ho an'izany, hisokatra ny famandrihana CAL eo anelanelan'ny 9 maraina ka hatramin'ny 6 hariva ny asabotsy ka hatramin'ny 1 hariva hariva ny alahady.
Hatreto dia olona 921 no nijanona tamin'ny sidina famindrana ary 370 no niverina.
Ny antsoantso dia ho an'ireo 75th tsingerintaona nahaterahana D-Day nanondroana ny nitolo-batana tsy misy fepetra nataon'ny Nazis, ny Vokovoko Mena amin'ny Andro Vokovoko Mena androany sy ireo mpilatsaka an-tsitrapo ao aminy.
Noderainy koa ny Alliance to End domestic Domestic Violence, izay niaraka tamin'ireo antokon'ny governemanta sy ny Crisis Center dia nikarakara webinar ho an'ireo olona tratry ny herisetra an-trano nandritra ny areti-mandringana.
Nanao antsoantso ny reny rehetra tany amin'ny nosy Cayman ho an'ny Alahady Fetin'ny Reny ny Minisitra.
Nasongadiny ny kaonseritra virtoaly "To Mother With Love" izay hiarahan'ny Konferansa SDA sy ny Lions Club of Grand Cayman. Manasongadina ny talenta Cayman tsara indrindra sy fampisehoana vahiny manokana nataon'ny mpanakanto filazantsara iraisam-pirenena Glacia Robinson, ny hetsika dia atao ny Alahady 10 Mey amin'ny 6 ora hariva ary halefa mivantana ao amin'ny pejy Facebook an'ny Lions Club of Grand Cayman sy Cayman Mothers Day ary koa alefaso amin'ny CIG TV avy eo.
Talen'ny HMCI Danielle Coleman nanao hoe:
Ny Nosy Cayman dia eo am-piomanana amin'ny COVID-19 sy ny vanim-potoanan'ny rivodoza ho avy.
Miaraka amin'ny fanalefahana ny famerana tsy fahazoana mivezivezy ao amin'ny LC sy CB amin'ity herinandro ity dia mijanona ao amin'ny 15 Mey 2020 amin'ny 5 maraina ny fameperana tsy fahazoana mivezivezy.
Fiambenana malefaka na fialofana amin'ny fitsipiky ny toerana ao amin'ny Grand Cayman mijanona eo anelanelan'ny ora an'ny 5 maraina sy 8 alina isan'andro alatsinainy ka hatramin'ny asabotsy.
Fitsidihana mafy na fanidiana hidy feno, mitahiry ho an'ny mpiasa tena ilaina tsy voatanisa dia mbola miasa ihany CB eo anelanelan'ny adin'ny 8 alina ka hatramin'ny 5 maraina alina Alatsinainy ka hatramin'ny alahady. On Grand Cayman, dia curfew mafy eo anelanelan'ny ora an'ny 8 alina sy 5 maraina alina Alatsinainy ka hatramin'ny alahady ary Ora famandrihana 24 ora amin'ny alahady - manomboka amin'ny sasakalin'ny sabata ka hatramin'ny alin'ny sasakalina.
Ny fe-potoana feno 24 ora tsy azo ihodivirana rehefa mifandray amin'ny fidirana amoron-dranomasina mankany amoron-dranomasina any Grand Cayman dia mijanona hatramin'ny toerana hatramin'ny zoma 15 Mey amin'ny 5 maraina. Midika izany tsy misy fidirana amin'ny torapasika am-bahoaka amin'ny GC amin'ny fotoana rehetra hatramin'ny zoma 15 Mey amin'ny 5 maraina. Izany dia mandrara ny olona tsy hiditra, handeha an-tongotra, milomano, snorkeling, manjono na manao karazana hetsika an-dranomasina amin'ny morontsiraka rehetra amin'ny Grand Cayman. Ity fameperana ity dia nesorina tao amin'ny Cayman Brac nanomboka ny Alakamisy 7 Mey hariva.
HSA manitatra fahaiza-manao COVID
Ny fahasalamam-bahoaka dia mandahatra fotoana amin'ny mpiasa amin'ny laharam-pahamehana ho an'ny ho avy azo tsinjaraina raha toa ka mihalalaka ny ezaka fitiliana. Ny mpiasa laharana 2 sy ny isan-jaton'ny mpiasan'ny fananganana dia kasaina hatao amin'ny fisavana. Ny HSA, ny fahasalamam-bahoaka ary ny Lehiben'ny mpitsabo dia miara-miasa amin'ny laharam-pahamehana amin'ny olona na orinasa izay heverina fa mpiasa laharam-pahamehana.
“An'arivony ny olona heverina fa mpiasa an-tsokosoko, ka afaka herinandro vitsivitsy vao tafavoaka amin'ny maro an'isa. Fantatray fa misy ny fitaintainanana amin'ny vahoaka amin'ny ankapobeny mba hosedraina, ka ezahinay ny misimisy araka izay azo atao, ”hoy i Dr Samuel Williams-Rodriguez, tompon'andraikitra amin'ny fahasalamana. "Ankoatry ny fandefasana ny sivana, ny mpikambana avy amin'ny Fahasalamam-bahoaka koa dia manao fitiliana eny an-toerana ho an'ny orinasa lehibe kokoa, ahafahan'ny mpiasa misintona tsy mila miala amin'ny toeram-piasana."
United Airlines: Filoham-pirenena vaovao mitondra ny anarana